Ukuba ufuna intliziyo yakho ihlale isempilweni kwaye iyomelele, kufuneka wenze okuninzi: ukudlala ezemidlalo, ukuhlala uhlala ngaphandle, ukuphumla ngokupheleleyo, ube kwindawo ezolile kunye ehambelanayo, ngokuzonwabisa kunye novuyo. Nangona kunjalo, apha siza kuthetha ngeemveliso eziyimfuneko nje ngentliziyo, kodwa ngesizathu esithile sidla imveliso eyahlukileyo.
Eyokuqala sinokutya kunye nemveliso yenyama, ngaphandle kwayo asikwazi ukupheka isobho, okwesibini, ngaphezu koko, sixuba kunye namaqanda, ushizi kunye nemveliso engahambelani nenyama. Intliziyo ayifuni, njengokuba kunjalo, inyama, kodwa intlanzi, ngokudla rhoqo, le ngenye into. Eyona nto ihamba phambili yentlanzi, i-salmon oros, i-mackerel okanye i-herring, i-tuna okanye i-sardines. Inkathazo ngumlambo kunye neentlanzi zentlanzi, kodwa iyanceda. Ngokuqhelekileyo, nayiphi intlanzi iphucula ukubunjwa kwegazi, ayiniki igazi, kwaye ngaloo ndlela ikhusela isifo senhliziyo.
Iitshizi ngumkhiqizo o luncedo kwintliziyo. Zithintela izifo ezifana ne-atherosclerosis kunye ne-ischemia. Ukutya kufuneka kukhethwe i-hareley, i-oatmeal, irayisi ebomvu, i-millet. I-Buckwheat ayithathwa njengenkcubeko yokutya, kodwa isisondlo, kwaye iqulethe ixabiso eliqhelekileyo - yinto ephucula ukujikeleza kwegazi, ubuyisela amandla kunye nokunyaniseka kwiinqanawa kunye ne-capillaries, kwaye inqanda ukucinywa.
I-hareyi iqulethe iindidi ezinokutya ezinomdla ezikhupha i-cholesterol eyingozi emzimbeni. Kwaye ummbila usinika i-antioxidants kunye nama-amino acids, ngakumbi xa sisitya kunye neembotyi kunye neembotyi.
Ubhontshisi obomvu kunye neelentile zizona zixhobo ezincedo kakhulu, ziqukethe i-potassium, zibalulekile entliziyweni, kwiiprotheni zemifuno kunye ne-fiber, ngoko akukho mfuno ekhethekileyo yokutya, kuba i-legumes isilungele indawo yayo, kodwa ingenayo i-fat oil. Iimbotyi kunye neembotyi zizityebi kwi-flavonoids, i-iron kunye ne-folic acid. Ukuba awanelisekanga, iindonga zeempahla zitshabalaliswa, kwaye ngoko ke i-bean zikhuseli zentliziyo yethu, kwaye iintshaba ze-atherosclerosis kunye ne-infarction nazo zilandelana.
Nabani na onenzuzo, zombini intliziyo kunye nayo yonke impilo, nangona ezinye zazo zingathathwa nje njengesipho sesimo sethu. Ngokomzekelo, i-Broccoli, iyona nto ibaluleke kakhulu phakathi kwee-klabishi, iqulethe i-antioxidants kunye neemaminerali - lo mveliso ongcono kakhulu ukuqinisekisa ukukhuselwa kwe-atherosclerosis. Le iklabishi inemibala ebomvu, iyakwazi ukunciphisa i-carcinogens engena emzimbeni.
Iphunga isisityalo apho kukho i-potassium eninzi, i-vitamin C, i-beta-carotene kunye nezinye izityela kunye namavithamini. Ukuba udla ngokutya, iinqwelo ziya kuhlala zihlambulukile, uxinzelelo lwegazi luqhelekileyo, ukunyakaza kuya kukhululeka kwaye kulula, kuba umbane ogqithiseleyo awuyi kuqokelela emzimbeni.
I-Garlic, okokuqala, iyisisombululo esilungileyo ekulwa nemibonakalo kunye neentsholongwane, iyeza elihle kakhulu loxinzelelo lwegazi. Ukuba ingcinezelo iphakama, kufuneka uyidle imihla ngemihla. Iimpawu ezikhoyo ekwakheni igalikhi, kungekhona nje ukucoca iinqanawa, zinciphisa ithoni xa zivela, kwaye ngoko ingcinezelo iyancipha. Umntu onempilweni akasongelwa ngokuncipha kwengcinezelo, kodwa impilo yakhe iya kuqhubeka iminyaka emininzi. Usenayo iipropati ze-carcinogen.
Ama-mushroom amaninzi aphathwa ngokuphefumula, athathwa njengento ecocekileyo okanye isikhenkco esilunxilisayo, kwaye ziyimfuneko yethu kunye nentliziyo yakho. I-fungi, njengoko yavela, izityebi kwi-argoxan, ikhusela izifo ze-cardiovascular kunye ne-ecological, ukuphucula ukuveliswa kwegazi kunye neempembelelo zokuzibulala. Izinto eziwusizo kwi-fungus zikhoyo ngobuninzi - i-magnesium, ne-phosphorus, ne-potassium, nesinyithi, ne-zinc, i-iselen, kunye namavithamini D kunye neqela lonke B. Kukho nemifuno yeproteinyini. Ngokuqhelekileyo, i-fungus kufuneka iphathwe ngokungakumbi ngokukodwa, ingakumbi ukuba izitya zokupheka zivela kubo ngokucima, ukupheka, ukupheka kunye nokutshisa, abayi kulahlekelwa yimpawu zabo ezintle. Njengoko bathetha-kwaye banomhlwa, kwaye bancedo.
Imveliso ebalulekileyo kakhulu entliziyweni yintonga. Zineeprotheyini ezininzi, enokuzibuyisela ngokupheleleyo inyama. Ininzi yamantongomane, umzekelo, i-walnuts, i-pecans, yaseBrazil, iqulethe inani elininzi leoli, kodwa lenye enye inqatha, ayifani nenyama enzima yomzimba. I-fat fat ayi-fatty acid e-unsaturated-linoleic, i-linolenic, i-oleic, i-palmitic, i-stearic, njl. Ukusetyenziswa kwayo kwaziwa kubo bonke abakhusela impilo yabo.
Ezi zinto zifumaneka kwioli ye-flax, apho kukho i-omega-3 fatty acid. Ukuba uzalisa ii-porridges nee-salads ezifana neoli, kodwa ungazithobeli ekusebenziseni ukushisa, i-cholesterol egazini iya kuba yinto eqhelekileyo, kwaye izitya ziya kuhlambuluka kwaye ziya kuba nempilo. Kodwa akufanele baphathwe kakubi - iipunipoli ezi-2 ngosuku.
Iziqhamo zase-Overseas. Ubuninzi be-polyunsaturated fatty acids, iivithamini kunye neemaminerali - olu buncwane lukwipalacado. Ukusebenzisa njengento yokutya, uya kuqinisekisa umsebenzi owenziweyo wenhliziyo, ukulibala ngesifo esinjenge-atherosclerosis kunye nengxaki ngentliziyo, uxinzelelo lwakho luya kuqheleka, luya kuba luhle kakhulu kulwakhiwo. Ukutya okudliwayo kuyadliwa okuluhlaza, ngoko esi siqhamo siya kunika ukunambitheka okungavamile kwimivuzo eyahlukileyo. Yaye ukuba uthe wongeza kubo kunye nee-oranges, kunye ne-lemons, i-toast iya kuba yinto emangalisa.
Hlaziya ezinye izityalo ezincedo entliziyweni iipomegranati, iipulole, iidipefruit. Kufuneka uhlawule umrhumo kwi-raspberry, ebomvu kunye ne-black currant, i-cherry, i-cherry gem. La majikijolo kunye neziqhamo azinjalo nje, ziyakwazi ukuqinisa imivenge yegazi, ukuphucula igazi. Bagcina uxinzelelo kwi-norm, prophylaxis kuzo zonke izifo zentliziyo, zikhusela kwisifo esinjalo esibi, njengomhlaza. Iipropati zokuphulukisa kuzo ziqulethwe kumlinganiselo omkhulu kangangokuthi akunakwenzeka ukuluhlula bonke.
Ezinye iimveliso. Cinga nge tshokoleji, kodwa akusiyo ubisi kwaye uyabumnandi. Kukho imbono yetshokolethi yemvelo, ebrakra kunye emnyama, ukuphucula umsebenzi wentliziyo, ukukhupha i-cholesterol embi nokunciphisa uxinzelelo lwegazi. Namhlanje unokuyifumana i-tsholeta equle kwi-99% yeembotyi ze-cocoa. Okanye uthenge enye apho ubuncinane i-70%. Ukuthenga i-chocolate, apho i-cocoa yangaphantsi, ayifanelekanga - uya kuzuza iipounds.
Isaladi yezithelo eneepomelo
Indlela yokwenza isifiso sokuba kuzaliseke
Ngenxa yomyeni wakhe omtsha, u-Alena Vodonaeva wenqabe unyana wakhe
Umyeni kaCeline Dion wafa
Iintaka zazilele. Ukutolika?
I-Typology yooyihlo esizayo
URosa Syabitova malunga nomtshato wesithathu: Ndidibana nendoda ethandekayo
Iibhatateshi ngendlela efanayo